Junsun D100 GPS လမ်းညွှန်စျေးနှုန်းမှ ...
အစ » ထုတ်ကုန်များ » Junsu D100 ဂျီပီအက်စ်အညွှန်း
အစကားတစ်စီးကုန်ပစ္စည်းများကားတစ်စီးဆက်စပ်ပစ္စည်း, GPS, မာလ်တီမီဒီယာစနစ်များJunsu D100 ဂျီပီအက်စ်အညွှန်း
Junsu D100 ဂျီပီအက်စ်အညွှန်း
နောက်ဆုံးရေးသားချိန်ဖေဖော်ဝါရီလ 2020, 26 20:09 pm တွင်
စျေးနှုန်းသမိုင်း Junsu D100S73D လက်မကား GPS စနစ်ကိုရေကြောင်းကဘလူးတုသ် Mointor Rearview ကင်မရာအခမဲ့မြေပုံ Touch ကိုမျက်နှာပြင် / w
€ 72,94 - 2020 18 ဇန်နဝါရီလ
€ 72,22 - 2019 1 Aprilပြီလ
€ 65,77 - 2019 8 မတ်လ
€ 72,22 - 20195မတ်လ
မှ: မတ်လ 2019, 5
အမြင့်ဆုံးစျေးနှုန်း: € 72,94 - 2020 18 ဇန်နဝါရီလ
နိမ့်ဆုံးစျေးနှုန်း € 65,77 - 2019 8 မတ်လ
Junsu D100S73D လက်မကား GPS စနစ်ကိုရေကြောင်းကဘလူးတုသ် Mointor Rearview ကင်မရာအခမဲ့မြေပုံ Touch ကိုမျက်နှာပြင် / w
Maps ကိုအခမဲ့နှင့်အတူ Junsu D100 ဘလူးတုသ်ကား GPS စနစ် Navigator
Maps ကိုအခမဲ့နှင့်အတူ Junsu D100 ကား GPS စနစ် Navigator
ကမ္ဘာ့ဖလားမြေပုံနှင့်အတူ Junsu D1007GPS စနစ် Navigator - Gearbest
အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်: Junsu D100 ဂျီပီအက်စ်အညွှန်း
X ကိုက x 24.00 15.70 11.50 စင်တီမီတာ x ကို 9.45 6.18 4.53 လက်မ x ကို
X ကိုက x 17.50 10.80 1.50 စင်တီမီတာ x ကို 6.89 4.25 0.59 လက်မ x ကို
3.5mm AV စနစ် interface ကို, Mini ကို USB port ကို, TF Card ကိုပေါက်
ဘူဂေးရီးယား, ဒတျချြ, ဖင်လန်, ပြင်သစ်, ဂျာမန်, ဂရိ, ဟီဘရူး, ဟနျဂရေီ, အငျဒိုနီးရှား, အီတလီ, အာနီယံ, ဘှ, ပိုလနျ, ပျေါတူဂီ, ရုရှ, စလိုဗ, စလိုဗေးနီး, တာကစပိန်, ဆွီဒင်, ယူကရိနျး
Microsoft Windows နဲ့အီး 6.0
1 x ကိုကား GPS စနစ် 1 x ကိုကားအားသွင်းကိရိယာ, ကို USB Cable ကို, 1 x 1 စုတ်ယူခြင်းဖလားကွင်းပိတ် x, 1 Clamp, 1 အင်္ဂလိပ်အသုံးပြုသူလက်စွဲစာအုပ် x သို့ပြန်သွားရန် x
Junsu D100 ဂျီပီအက်စ်အညွှန်းဗီဒီယိုများ
အဘို့အ9ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း Junsu D100 ဂျီပီအက်စ်အညွှန်း
ဇနျ - 2019 10 ဇွန်
Excellent ကထုတ်ကုန်ကဖော်ပြချက် atitinka ။ အဲဒီမှာအင်္ဂလိပ်တစ်ခုညွှန်ကြားချက်ဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့မလိုအပ်ဘဲအထဲတွင်ကျွန်မအဆိုပါ interface ကိုချက်ချင်းရုရှားအကြား switched နိုင်ပါတယ်🙂အင်တာနက်ကိုတဆင့်ကြည့်ရှုခဲ့ကြရသည်, ထိုကဒ်များပြီးသားအထဲတွင် install လုပ်ထားကြပါတယ်။ microSD နဲ့ flash ကို 32 GB အထိမောင်းနှင်ထောက်ခံပါတယ် AVI, ဘုံကို formats နှင့် mp4, mpge, စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင်ဖတ်တယ်။ ဂြိုဟ်တုဿုံဖမ်း! ယေဘုယျအားဖြင့်ဝယ်ယူအလွန်ကျေနပ်ပါ! အဘယ်သူအားမျှ
Yura - 2019 10 ဇွန်
Навигаторна3။ Приработегреется, прихолодномстартедолгуищетспутники, когдасветитсолнцемаксимальнойяркостиэкрананехватаетивэкранприходитьсявглядыватьсяမူ။ Несмотрянаслабуюбатареюдлятакогобольшогоэкрана, онадержитзарядболее 20 минутပံ့ပိုးမှုအပိုင်းအစပျက်စီးလွယ်ပုံပေါ်သည်။ အဘယ်အရာကိုမျှ cons ကျွန်မအကြံပြုခဲ့သည်။
Lscorp - 2019 10 ဇွန်
အခြားကိရိယာ SD ကဒ် slot က expansion 8GB internal memory Multi-ဘာသာစကားНетуအားဖြင့်ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများနှင့်ဂီတ: ဘလူးတုသ်နှင့်အတူ Built-in Mic ဖုန်းတွဲဖက်မှု FM ရေ transmitter ကိုခေါ်ဆို
နွား - 2019 10 ဇွန်
Отличныйнавигаторсборканавысотекаробкакрасивая။ Экранвданноймодельемкостнойиззачегоотзывчивостьотличнаяဘယ်ငါနှင့်အတူမပျော်ရွှင်မိပါတယ်တစ်ခုတည်းသောအရာဘက်ထရီဖြစ်ပါတယ်။ ယင်းယူနစ်ရှိတယ်ဘယ်ဟာဘက်ထရီ၏ Buildup သာပိုမိုပေါ့ပါးသည့်စီးကရက်ကနေဖြုတ်ထား, သင်အချိန်တိုတောင်းတဲ့ကာလကိုပေးသနား။
လက်တွေ့ဘလူးတုသ် FM ရေ modulator တွေကို